स्वास्थ्य Archives - Saajha Khabar
सलाद, अचार बनाएर वा खाली चपाएर पनि हामीले गाजर खाइरहेका हुन्छौँ। देख्दा पनि राम्रो र खाँदा पनि मीठो हुने भएकाले गाजर हाम्रो भान्साको अभिन्न अंग नै बनेको हुन्छ। हामीले खाइरहेको गाजरका फाइदाका बारेमा सबैलाई जानकारी नहुँन सक्छ। आज हामी तपाईलाई गाजर खानुको फाइदाका बारेमा केही जानकारी दिदैछौँ : १. आँखाको शक्ति बढाउँछ : गाजर आँखाको स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ। गाजरमा प्रसस्तै बिटा क्यारोटिन नामक तत्व पाइन्छ जुसबाट भिटामिन ए अनियमित रजस्वलाको समस्यामा हुनुहुन्छ भने यस्ता छन समाधानका उपायहरु
अनियमित महिनावारीलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘ओलिगोमेनोरिया’ भनिन्छ, जुन अधिकांश महिलाहरूका लागि साझा समस्या बन्दै आएको छ। तौलमा घटबढ, चिकित्सकीय समस्या, अस्वस्थ खानेबानी तथा जीवनशैलीजस्ता अनेकौँ कारणले गर्दा हुने अनियमित रजस्वलाले गर्दा महिलाहरूमा अनावश्यक तनाव उत्पन्न गराउन थाल्दछ। यसैकारण नै आज हामी तपाईँहरूलाई यस्तो तनावबाट मुक्त गराउने सुरक्षित तथा प्राकृतिक उपायहरूको बारेमा छोटो जानकारी दिन गैरहेका छौँ। अनि थाहा छरु अनियमित रजस्वलाको समस्याबाट राहत दिने उपचार विधिहरू प्रकृतिकै कोखमा भेटिन्छन्, जुन हामीले यस्ता छन्,ग्यास्ट्रिक भएकाहरूले ध्यान दिनै पर्ने ५ कुराहरु
नेपालमा ग्यास्ट्रिक अर्थात ग्यास्ट्राईटिसबाट धेरै पिडित छन् । अहिलेका बिद्यार्थीहरुले पढाईलाई ख्यालमा राख्दा उनीहरु समयमा खाना खान पाउँदैनन् । खानाको तालिका नै बिग्रीएको हुन्छ । लामो समय सम्म खानाको सन्तुलन नमिल्दा पछि गएर पाचन प्रक्रियामा समस्या आउन देखी ग्याष्ट्रिक हुने सम्मका बिभिन्न समस्याहरु आउँछन् । तर हामीले खानपानका सामान्य कुराहरुमा ख्याल पु¥याउने हो भने यसबाट बच्न सकिन्छ । ग्याष्ट्रिकको समस्या भईहालेमा पनि केही कुराहरुमा ध्यान दिएमा ग्याष्ट्रिकको जटिलताबाट बच्न सकिन्छ सर्वसाधारणलाई सैनिक अस्पतालको सेवा तुरुन्त दिन नसकिने
शिवरात्रिपछि सेवा सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको घोषणा अलपत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी १३ फागुनदेखि सर्वसाधारणले पनि वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट उपचार सेवा पाउने घोषणा गरे पनि आवश्यक तयारी थालिएको छैन । तयारी सुरु नहुँदा सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा नआउने देखिएको छ । सैनिक अस्पताल स्रोतले पनि १३ फागुनदेखि सर्वसाधारणलाई सैनिक अस्पताल खुला गर्न नसकिने जनाएको छ । विनातयारी सस्तो लोकप्रियताका लागि अभिव्यक्ति दिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताएका छन् । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण र विहान उठ्नसाथ यी काम कहिल्यै नगर्नुहोस
बुढा पाकाहरुले जीवनका बारेमा भनेका कतिपय कुराहरु बैज्ञानिक छन् । तर पछिल्लो समयमा मानिसहरु बुढा पाकाले भनेका जीवन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कुराहरुलाई वास्ता नै गर्दैनन् । यहाँ त्यस्तै मान्यताको चर्चा गरिएको छ जुन विहानमा उठ्ने वित्तिकै गर्नु निक्कै अशुभ मानिन्छ । विहान उठने वित्तिकै गर्नै नहुने ५ कामः १. सहवास नगर्नुस् : विहान उठ्ने वित्तिकै सहवास गर्नु राम्रो मानिँदैन । विहानको सहवासमा शरीरमा जम्मा भएको सकारात्मक उर्जा नष्ट हुने र नकारात्मक यसरी तपार्इँको सौन्दर्यलाई पनि हानि गर्छ मोबाइलले
एजेन्सी । स्मार्टफोनले हाम्रो खाली समयलाई सहज त तुल्याएको छ तर यसको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै जान थालेको छ । हाम्रो निद्रा, यौन जीवन समेत प्रभावित गरेको स्मार्ट पोनले हाम्रो सौन्दर्यमा समेत प्रभाव पार्न थालेको तथ्य पत्ता लागेको छ । हामीले स्मार्ट फोनमा हेर्नका लागि निरन्तर निहुरिने हुँदा त्यसको असर छालामा पर्ने र छाला चाउरिने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । ग्याजेट्सको धेरै प्रयोग गर्नेहरुको घाँटीर चिउँडोको छाला चाउरिने र उनीहरु छिटो बुढो फाटेको छालालाई निर्मुल पार्ने घरेलु उपायहरु
१. चिनी २ चम्चा चिनीमा बदामको तेल र कागतीको जुस मिसाई घोल्नुहोस्। त्यस मिश्रणलाई छालामा भएको दागमा लेप्नुहोस् र १० मिनेटसम्म दाग वरिपरि मसाग गर्नुहोस्। १० मिनेटपछि त्यसलाई पखाल्नुहोस्। यो विधि १ महिनासम्म नियमित अपनाउनाले च्यात्तिएको छालाको दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छ। २ .आलु आलुमा प्रशस्त खनीज पदार्थ र भिटामिन पाइन्छ। यसमा भएको भिटामिन(ई र के ले छालाका कोषहरूको वृद्धिविकासका साथै छालाको दागधब्बालाई निको पार्ने काम पनि गर्छ। त्यसैलेस आलुलाई काटेर यसरी ओठ हेरेर थाहा पाउँन सकिन्छ महिलाको यौन चाहना कति हुन्छ भनेर
काठमाडौं। ओठमा पनि महिलाको धेरै सुन्दरता लुकेको हुन्छ । गुलाबी ओठ महिलाको लागि सुन्दरताको महत्वपूर्ण अंश हो । तर ओठ अब सुन्दरताको अर्थमा मात्र सिमित रहेन । एक अनुसन्धानले महिलाको ओठले उनको यौनव्यवहारको गोप्य कुरा समेत थाहा हुने पत्ता लागेको छ । स्टकल्याण्डमा गरिएको अध्ययन अनुसार थेप्चो ओठ हुनेभन्दामाथिल्लो ओठ बिचमा केही अग्लो र थोरै चुच्चो (क्युपिड बो) भएका महिला यौन सम्पर्कका बेला छिटो चरमोत्कर्षमा पुग्छन् । महिलाको ओठको प्रकार दैनिक बिहान पुरुषले भिजाएको चना खानहोस,फाइदाहरु यस्ता छन
मुठ्ठी भरी चना लिनुहोस् र यसलाई राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् । त्यसमा पानी हाल्नुहोस् र रातीभरी भिज्न दिनुहोस् । बिहान चना निकालेर राम्रोसँग चपाएर खानुहोस् । चाहनुहुन्छ भने पानीलाई पनि छानेर पिउनुहोस् । यसले दोब्बर फाइदा हुनेछ । ताकत र ऊर्जाः भिजाएको चना ताकत र ऊर्जाको निकै राम्रो स्रोत हो । यसको दैनिक सेवन गर्नुहुन्छ भने कमजोरी हट्छ । कब्जियतबाट राहतः भिजाएको चनामा अत्यधिक फाइबर हुन्छ । यसले पेट सफा गर्छ यदि हजुरलाई यी लक्षणहरु देखा परेमा बुझ्नुस् क्यान्सर लाग्दै छ,
यी १० लक्षण देखिए क्यान्सरले छोड्दैन । र क्यान्सरले ज्यान लिन्छ । तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् । विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीकालमा निम्न लक्षण देखिन्छन् १- निरन्तर खोकी- फोक्सोको क्यान्सर फोक्सोको क्यान्सर धेरै नै नफैलिए सम्म अधिकाँश मानिसले चाल पाउँदैनन् । कतिपय मानिसमा भने फोक्सोको क्यान्सरका लक्षण शुरुमै देखिन्छन् । फोक्सोको क्यान्सरका मुख्य लक्षण पुरानो खबर यता »